Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0613 lat
Mpijoro vavolombelona malaina
Alatsinainy 06 May
Ao amin’ny Jônà 1, dia nandefa rivo-mahery, izay nampahatahotra ireo matilò tao anaty sambo, Andriamanitra mba hampitsaharana ny fandosiran’i Jônà. Samy nitaraina tamin’ny andriamaniny avy ireto tantsambo. Noho ny hamafin’ny tafiotra, dia nahatsapa izy ireo fa misy mihitsy olona nampahatezitra ireo andriamatra ka nahatonga izao zavatra izao. Dia natao ny filokana hahitana izay hilazalaza ny momba ny tenany voalohany mba hahafantarana ny fototry ny loza. Samy naka vato na hazo misy marika ny tsirairay ho fanatanterahana ny filokana. Avy eo dia atao anaty zavatra ny hazo sy ny vato rehetra, ahontsakontsana mandra-pivoaky ny hazo na vato anankiray. Nitontona tamin’i Jônà ny filokana, ka indro izy ankehitriny fa niaiky ny fahotany ary nandrisika ireo matilò mba hanipy azy any anaty ranomasina.
Mahagaga ity tantara ity satria voalaza ao fa nanao zavatra tsara ireo matilò, izay tsy Hebreo akory, fa i Jônà kosa dia aseho amin’ny lafiny ratsy. Na dia manompo andriamanitra maro aza izy ireo dia nampiseho fanajana lehibe an’Andriamanitra izay nivavahan’izy ireo. Naneho halemem-panahy tamin’i Jônà, mpanompon’i Jehôvah, ihany koa izy ireo, dia i Jônà izay antony nahatonga azy ireo hiala tamin’ny lalany sy hiezaka hiverin-dalana hamonjy tany maina. Farany, dia nifanaraka tamin’i Jônà izy ireo fa hanipy azy any anaty ranomasina. Rehefa vita izany dia nitsahatra ny rivotra ka namono zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehôvah ireo matilò sady nankalaza Azy.
Eo amin’ny and. 9, ahoana no anehoan’i Jônà Ilay Andriamanitra Izay lazainy fa atahorany? Inona no tena manan-danja amin’ny fomba nanehoany an’Andriamanitra? Jereo koa ny Apôk. 14:7; Isa. 42:5; Apôk. 10:6.
Ny fiaikem-pinoana nataon’i Jônà momba an’Andriamanitra amin’ny maha-Mpahary ny ranomasina sy ny tany maina Azy dia nampiharihary ny maha-zava-poana ny fiezahany handositra ny fanatrehan’ Andriamanitra. Ny fitsaharan’ny rivotra vetivety foana taorian’ny nanipazan’ireo matilò azy tany anaty ranomasina dia nampiseho tamin’izy ireo fa mifehy ny ranomasina Andriamanitra amin’ny maha-Mpamorona Azy. Noho io zava-nitranga io, dia vao mainka nanompo an’Andriamanitra ireo matilò ireo. Tsy voalaza amintsika hoe naharitra hafiriana ny fahatahoran’izy ireo sy ny fanajany ny Mpahary. Azo antoka kosa anefa fa nandray lesona momba an’Andriamanitra avy tamin’izany fanandramana izany izy ireo.
Sarotra ho antsika ny hahatakatra ny ankamaroan’ny zava-mahagaga mitranga manodidina antsika, ary sarotra mihoatra noho izany ny hahatakarantsika ny zavatra tsy takatry ny retsi-pandre na ny eritreritsika koa aza. Fomba ahoana no iresahan’ny Mpamorona aminao amin’ny alalan’ireo zavatra noforoniny?